Ufundo lwango-2013 lwentengiso yedijithali yokuthengisa | Martech Zone
Siya kutyunyuzwa. Ukunqongophala kobungcali noqeqesho, ulwakhiwo olungalunganga kunye neenkqubo, kunye neendlela zelifa ezendeleyo ngabathengisi abakhubazekileyo kule mihla. Izixhobo kunye neetekhnoloji ziyavela kwaye ziyavela rhoqo ngeveki enye- kodwa ayonelanga. Esi sesona sizathu siphambili sokuba siqale Highbridge… Abathengi bethu bafuna ukonyuswa ukubanceda baqhubele phambili kwaye basebenzise ngokukuko uhlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa kwizicwangciso zonke.
Ukuqonda kweli nqaku kufunyenwe kumava athe ngqo asebenza nabaphathi beempawu kunye nabathengisi, kuvavanyo lobungakanani beenkokeli zokuthengisa ezimalunga nama-200 (I-Finch Brands kunye neNetplus Digital Pulse Study, Agasti 2013), kunye noluhlu lodliwanondlebe nabantu abasebenza kule ndawo yemihla ngemihla. Iziphumo zibonise ngokucacileyo ukuba lixesha lokuba abathengisi bayeke ukwenza ngathi yonke into iphantsi kolawulo. Impumelelo okanye ukusilela kweempawu zabo kuxhomekeke kuyo.
Yintoni le iqela lakho lisokolayo nayo? Uyoyisa njani le mingeni? Funda yonke inqaku leNetplus ngezigqibo zabo.
tags: ukuthengiswa kwedathaisifundo sentengiso yedijithaliiimveliso zefinchuphando lwezentengisouphando lwezentengisonet kunye
I-Reactor yeNtlalontle: Ama-7,000 aBaphembeleli boLuntu kuLungele
Urhwebo lwe-IBM oluQhelekileyo: Iplatifomu yokuHlola yoLuntu ePhambili